Kufamba Kubva kuRoma Kuenda kuParis Na Highspeed Chitima | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Kufamba Kubva kuRoma Kuenda kuParis Na Highspeed Chitima
Paris uye Roma vari pamusoro anenge ose mufambi wacho bhakiti mazita. Maguta aya kunoshamisa dzakakurumbira kuti tsika dzavo, nyika-kirasi chili, pezvinhu akitekicha uye saka zvakawanda. Apo Roma uye Paris vari kure nakure, vari zvakanaka zvakabatana nechitima. Izvi zvinoreva haufaniri kusarudza pakati izvi maguta nakisa, unogona kuvashanyira vaviri! Kukubatsira kuti ichi rwendo sezvo kunakidze sezvinobvira isu nemi kubva kuRoma kuenda kuParis neHighspeed Chitima.
Travel vakuru-nokukurumidza nezvitima
Mungati kurumidzei kuburikidza France uye Italy vachishandisa chete mukuru-nokukurumidza kwokubatana. One of the fastest and most comfortable ways to travel from Rome to Paris is by taking the Thello soro-nokukurumidza chitima. chitima ichi akararama zvichaita whisk kuParis hakuna nguva. Chekutanga, uchaenda nechitima chekumhanya kuRome kuenda kuMilan neMilan kuenda kuParis pazvitima zveTllo zvakakwira. Nguva kuvhakacha rwendo urwu dzinosiyana, zvichienderana iyo rokukurovedzai nonga. Tinoratidza iwe bhuku zvigaro zvako pachine sezvo unofanira kuti Reservations nokuti nezvitima izvi hwokuchengetedza chigaro.
Ryon kusvika kuNice Nguva dzechitima
Tora yevedza nzira – Rome kuParis kubudikidza Highspeed Train
Zvichienderana nenzira yaunofunga kutora kana iwe uchifamba kubva kuRoma kuenda kuParis nechitima chakakwira, yaungada vanakidzwe kuongorora rimwe ramaguta yakaisvonaka France munzira. Zvakanaka soaks kumusoro ukuru pamusoro Provence uye migove kuburikidza yayo naka mahombekombe, rwakakura promenade uye panze misika. Kumisa vari Nice kuchaita kuti uone imwe hunoshamisa chikamu France uye achaita zvakanaka kuputsa rwendo rwako kubva kuRoma Paris.
Shanyira mamwe maguta European munzira
Kunyatsoshandisa rusununguko rwenyu achishandisa kwematunhu nezvitima uye vakavhara kure mune dzimwe maguta European. Travel kubva kuRoma Milan, pana Geneva usati wasvika kwauri kuenda – Paris.
Aihwa chitima kufamba maawa anopfuura mana refu. Izvi zvinoita uyu akakwana nzira chero mushingi uyo haafariri dzakareba chitima Vatasvi. Zvakanaka kuyeuka kuti vamwe maguta anodhura kushanya pane vamwe, saka zvichienderana bhajeti yenyu imi kuti vanosarudza munhu urongwa kuti haibatanidzi ose pamaguta isu zvawanyora. Tarisa uone webhusaiti yedu uye iwe unogona kugadzira yako pachako kufamba kuti ikuwane kubva kuRoma uchienda kuParis neiyo highspeed chitima asiwo Kubva kuParis kuenda kuRoma neiyo njanji imwechete. Unogonawo angofambirana nenguva pamwe ichangobva kushambadza zvedu Facebook, Twitter uye Instagram mapeji.
Kufunga kuita nzira iyi kubva kuRoma Paris pachako? Enda ku SaveATrain Online kuongorora zvose zvedu oga fares uye kutanga kuronga yako inotevera ushingi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)